Jose Mourinho Oo Magacaabay AFAR Xiddig Oo Ingiriis Ah Laba Boos Ku Dagaallamaya - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJose Mourinho Oo Magacaabay AFAR Xiddig Oo Ingiriis Ah Laba Boos Ku Dagaallamaya
Jose Mourinho Oo Magacaabay AFAR Xiddig Oo Ingiriis Ah Laba Boos Ku Dagaallamaya
Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa magacaabay afarta ciyaartoy oo xulka qaranka England ah oo hal boos ku dagaallami doona ciyaarta soo socota, kuwaas oo midkood aanu tababare Gareth Southgate aan u jeclayn, laakiin daqiiqadaha uu soo galo uu si fiican u ciyaaro.
Ingiriiska ayaa 4-0 ku xasuuqay Ukraine ciyaartii wareegga siddeedda, waxaana laba ka mid ah goolashaas saxeexay Harry Kane oo kulankii kasii horreeyey furtay xisaabtiisa goolasha, haddana haysta saddex gool.
Tababare Gareth Southgate ayaa laga sugayaa in uu qaato go’aamo adag oo uu isbeddel sameeyo ciyaarta Denmark, waxaanu Jose Mourinho usoo jeediyey in uu khadka difaaca ka dhigo afar laacib halkii uu saddex ciyaartoy kusoo bilaabi lahaa.
Mourinho oo amaan u jeediyey Luke Shaw kulankii Ukraine ayaa tilmaamay in laacibkani uu bandhig cajiib ah sameeyey, waxaanu ku taliyey in lagu soo bilaabo ciyaarta Denmark. Sidoo kale, Kayle Walker, John Stones iyo Harry Maguire ayuu sheegay in ay tahay inay safka hore kasoo muuqdaan. Labada xiddig ee khadka dhexe ee Declan Rice iyo Kalvin Phillips ayaa uu iyagana ku daray xiddigaha ay tahay inay kusoo bilowdaan.
Tababaraha reer Portugal ayaa dhex-galay musalsalka go’aamada ee Gareth Southgate iyo sida uu u kala dooranayo Phil Foden, Jadon Sancho iyo Jack Grealish.
“Raheem Sterling iyo Harry Kane way iska caddahay inay kusoo bilaabanayaan, waxaase jira laba boos oo aniga fikrad ahaan aanu ku kala duwanahay.” Ayuu Mourinho ku bilaabay, waxaanu raaciyey: “Sancho si fiican ayuu u ciyaaray, Phil Foden wuu bilowday tartanka, sidaas oo kalena waxa ah Mason Mount, halka Jack Grealish aanu ku jirin ciyaartoyda uu jecel yahay Gareth Southgate laakiin daqiiqad kasta oo uu garoonka ku jiro shaqo fiican ayuu qabtaa.
“Waxa jira dookhyo badan oo labadan boos ah, balse anigu waxa aan aaminsanahay in ku ciyaarista Wembley ay England mar kasta ka dhigayso waddan adag. Waxay isku dayi doonaan in ay guuleystaan sida ugu dhakhsiyaha badan, mana rumaysni in ay u baahan yihiin inay ku ciyaaraan saddex difaac sidii kulankii Germany.”
Mourinho waxa uu u digay xulka England oo uu u sheegay inay si wanaagsan u ciyaarayaan, loona baahan yahay inay taxadar sameeyaan.